Bulldozer akụkụ ahụ mapụtara
Akụkụ akụrụngwa nke excvator
Bulldozer n'okpuru ụgbọ ala
Otu ngalaba Sprocket
Ụgbọ ala nke Excavator
Onye na-ebu Roller
Otu n'ihu Idler
Otu esi echekwa ndụmọdụ ngwa bulldozer na-adịghị arụ ọrụ ogologo oge
site admin na 21-11-07
Ọbịbịa nke bulldozers nyeere anyị aka dozie nsogbu nke igwu ala na nkume. Ma a gaghị eji bulldozers mee ihe ruo oge ụfọdụ n'ihi oge mgbanwe. Ị maara...
Otu esi amata uru na ọghọm dị na ngwa bulldozer
site admin na 21-10-28
Akụkụ ndị dị elu bụ ihe ndabere iji hụ na arụ ọrụ nke igwe na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ, ma n'ihi na-edozi mkpa igwe na mmasị nke ụgbọala ahụ, nke mere na ahịa ahụ nwere àgwà dịgasị iche iche nke na-adịghị mma nke akụkụ ihe owuwu ihe na-ebubata. Lee...
Gịnị bụ mmetụta nke nchara nchara na àgwà nke ihe owuwu ígwè akụkụ
site admin na 21-10-19
"Ụgbọala ígwè na-ezo aka n'efu ígwè dị ka akụrụngwa, na-eji ike ugboro, ọkara ugboro induction ọkụ smelting usụhọde, ala àgwà ígwè ngwaahịa" .Na-ekpochapụ akporo mkpochapụ: "mwepụ nke mmepụta nke n'ala ígwè, ígwè ingot ma ọ bụ na-aga n'ihu c. ...
Otu esi echekwa ma jikwaa chassis crawler bulldozer
site admin na 21-10-13
Crawler bulldozer bụ ngwa inyeaka dị mkpa na teknụzụ Ngwuputa Ngwuputa ugbu a.Mines na-eji ụdị dị ka Komatsu Caterpillar eme ihe kwa afọ na-eri akụkụ ndị na-ebugharị ebugharị nke ndị crawler bulldozers maka ihe dị ka 60% nke ọnụ ahịa mmezi niile. Ndị ọrụ ch ...
Olee otú ịnọgide na-enwe excavator undercarriage akụkụ
site admin na 21-10-11
Tupu anyị ekwu okwu banyere ọtụtụ ihe banyere excavator mmezi, taa, anyị na-ekwu banyere ihe excavator chassis kwesịrị ịnọgide na-enwe ma na-elekọta.Chassis kwesịrị ịnọgide na-enwe ihe ọ bụla ọzọ karịa support roller , Carrier roller, sprocket, idler and track chain assemb...
Otu esi amata ọdịiche Excavator na bulldozer ngwaahịa OEM site na ngwaahịa mbụ: teknụzụ isi dị iche iche, ndị nrụpụta, nwe ika
Nke mbụ, teknụzụ isi bụ ngwaahịa OEM dị iche iche: ndị na-emepụta OEM nwere teknụzụ isi isi ha. Nke mbụ: Onye nrụpụta izizi enweghị isi teknụzụ bụ isi nke pụrụ iche maka onye nrụpụta, mana ọ nwere ike bụrụ onye nrụpụta aka nke abụọ. ...
Otu esi zere ụdị crawler bulldozer gnaw track phenomen
Usoro ije nke crawler bulldozer bụ nke na-adịghị arụ ọrụ, onye na-ebu ụgbọ ala, ihe nrịbama egwu, sprocket, njikọ egwu, ngwaọrụ tensing crawler, etiti ije na ndị ọzọ. Isi ọrụ ya bụ ịkwado oke ahụ, belata mmetụta na ịma jijiji ...
Enwere ihe isii kpatara ọdịda China nke excavator na bulldozer dara
site admin na 21-07-22
N'ihi na ebe a na-egwupụta ihe na-arụ ọrụ dị mgbagwoju anya ma dị njọ, ọ bụ ihe a na-apụghị izere ezere iji wepụ ụdọ mgbe ụfọdụ. Ọ bụrụ na onye na-egwupụta ihe na-emekarị ka ọ bụrụ ihe kpatara ya, ọ dị mkpa ịchọta ihe kpatara ya, n'ihi na onye na-egwupụta ihe na-eme ka ọ dị mfe iduga na mberede. Yabụ kedu ihe kpatara ụdọ ogologo ogwe aka excavator ...
Mụta ịrụkwa sprocket cha cha n'ime nkeji ise
site admin na 21-07-16
Igwe ihe eji eme ihe nke gwuputa ihe na-ebu oke mmetụta na-arụ ọrụ. Mgbe excavator tilts, ọnọdụ nchekasị bụ ihe na-adịghị mma. N'ozuzu, mgbe onye na-egwupụta ihe na-agba ọsọ maka 350,000 h ma ọ bụ karịa, eriri igwe sprokcet sprocket ezé nwere ike ịdaba ma ọ bụ gbajie, na eze s ...
Ọnụ ahịa ihe akụrụngwa dị elu
site admin na 21-04-12
A na-ekwenyekarị na ụlọ ọrụ ahụ na ọnụ ahịa ọnụahịa akụrụngwa a na-abụkarị n'ihi ihe ndị a: 1. N'ihi mmetụta nke mbelata oke ike, ụfọdụ ikike mmepụta ihe adịghị ezu, ọdịiche dị n'etiti ọkọnọ na ọchịchọ na-abawanye. na ọkọnọ ujo...
Roba Track Rollers, Akụkụ ihe mkpuchi ịwụ ịwụ, Excavator ịwụ ịcha Edge, Ihe na-agba Track Roller, Bolt siri ike, Bit gwụchara okpukpu abụọ,